TRF ee Saxaafadda 2021 - Abaalka 'Reward Foundation Love, Jinsiga & Internetka'
Bogga ugu weyn TRF ee Saxaafadda 2021
Saxafiyiinta ayaa daahfuray The Reward Foundation. Waxay ku faafinayaan ereyga ku saabsan shaqadeena oo ay ka mid yihiin: casharradeena ku saabsan halista ka timaadda sigaar-cabista muddada-dheer; ku baaqida wax ku ool ah, barashada jinsiga ee maskaxda ku haya iskuullada oo dhan; ubaahantahay tababarida bixiyeyaasha xanaanada caafimaadka ee NHS ee ku saabsan qabatinka sawirada qaawan iyo waxqabadkeena cilmi ku saabsan dhibaatooyinka galmada ee sababa galmada iyo khalkhalka dabeecadaha galmada ee qasabka ah. Boggan wuxuu diiwaangeliyaa muuqaalkeenna wargeysyada iyo khadka tooska ah. Waxaan rajeyneynaa in aan soo dhejino sheekooyin badan oo dheeraad ah sida 2021 ay u socoto.
Hadaad aragto sheeko muujineysa TRF oo aanan wali dhigin, fadlan noo soo dir a note ku saabsan. Waxaad isticmaali kartaa foomka xiriirka qeybta hoose ee boggan.
Jaamacadaha si ay uga warbixiyaan sida ay u maareeyaan cabashooyinka 'dhaqanka kufsiga'
Waxaa qoray Mark Macaskill, Weriye Sare Axadda, 4 Abriil 2021.
Jaamacadaha Iskotishku waxay toddobaadyo gudahood ku soo sheegi doonaan natiijooyinka ka soo baxa dib u eegista ee ku saabsan maaraynta cabashooyinka anshax xumada galmada.
Daraasadaha waxaa amray Golaha Maalgelinta ee Scottish bishii Febraayo ka dib markii kiiska Kevin O'Gorman, oo ah borofisarkii hore ee Strathclyde oo lagu xukumay 2019 xadgudubka galmada ee toddobo arday oo arday ah intii u dhaxeysay 2006 iyo 2014.
Qeybta waxbarashada waxaa lagu hayaa baaritaan aan horay loo arag oo laga cabsi qabo in tacadiyada galmada ee ka dhaca jaamacadaha iyo iskuuladu ay yihiin kuwo baahsan
Walaaca ayaa kordhay toddobaadyadii la soo dhaafay. In ka badan 13,000 warbixinno ayaa lagu dhajiyay qof kasta oo lagu martiqaaday, degel la aasaasay 2021 halkaas oo ardayda iyo ardayda dugsiga iyo jaamacadaha, kuwii hore iyo kuwa hadda, ay si qarsoodi ah ula wadaagi karaan khibradooda "dhaqanka kufsiga" - taas oo ah dhaqan xumada, dhibaataynta, xadgudubka iyo kufsiga. ,
Shalay Soma Sara, aasaasihii bogga, waxay ku casuuntay taageerayaasheeda inay soo gudbiyaan talooyin ku saabsan isbedelka loo adeegsan doono in cadaadis lagu saaro dowladaha UK
Qaar badan oo ka mid ah markhaatiyada ku saabsan Casuumadda Qof walba ayaa muujinaya dugsiga ama jaamacadda lagu sheego inay ka dhaceen weerarro.
Dhowr qoraal ayaa magacaabaya Jaamacadda Edinburgh waxayna ku andacooneysaa kufsi galmo guryaheeda Pollock Halls.
Sannadkii hore Pollock Halls, oo leh 1,600 qol oo ku yaal saddexda xarumood, ayaa lagu magacaabay The Tab, oo ah wargeys jaamacadeed, isagoo leh heerka ugu sarreeya ee xadgudubyada galmada ee hoolalka Edinburgh.
Mid ka mid ah ardayda ayaa sheegay in ugu yaraan shan gabdhood oo arday ah uu halkaas ku kufsaday nin arday ah. Waxay yidhaahdeen: “Wuxuu iyaga ka dhigaa inay khamri cabbaan. Markay baxayaan wuxuu u galmoodaa iyaga oo aan haysan cinjir. Qofna ma sameynayo wax caawimaad ah ”.
Ardayga looma maleynayo inuu sameeyay cabasho rasmi ah jaamacaduna waxay xaqiijisay inaysan jirin eedeymo taariikhi ah oo ku saabsan anshax xumo galmo oo aan lagu soo wargalin booliska "toddobaadyadii la soo dhaafay".
Waxay tiri: “Waxaa naga go’an inaan wax ka qabanno arrimaha ku saabsan rabshadaha galmada ee ka dhaca xerada. Waxaan ardayda ku dhiiri gelinaynaa inay isticmaalaan wadiiqooyinka rasmiga ee loo tebiyo. ”
Golaha maalgelinta ayaa sheegay in uusan nidaamineynin hay'adaha tacliinta sare ee ismaamula.
Mary Sharpe, oo ah madaxa fulinta ee Reward Foundation, oo fiirisa cilmiga ka dambeeya galmada iyo jacaylka oo saldhigeedu yahay Edinburgh, ayaa tiri: “Waa maalin murugo leh oo ay tahay in dhallinyartu ay arrimahooda gacantooda ku qabsadaan iyaga oo adeegsanaya degello internet ah sida Qof kasta oo Casuumay. ” Waxay tiri qayb ka mid ah eedda waxay ahayd ficil la'aan ku saabsan xaddidaadda da'da ee bogagga internetka ee galmada.